Intetho yeNkulumbuso uMark Rutte Coronavirus: "Inzulu kakhulu, kodwa uBawo uyakukhathalela": UMartin Vrijland
Ifoto yomthombo: nu.nl
Incoko kaMark Rutte yecoronavirus kwiTV yayilungile kubo bonke abalandeli bakaSuku beNkosana abathanda urhulumente, nabo bathanda ukubukela intetho yobukumkani kunye nenqwelwana yegolide okanye iiflegi ezazibhabha ecaleni kwendlela yokufumana umbono kaMaxima. Sithetha ngabantu abathanda ukujonga ngaphezulu.
Ubuntu bohlobo olunomdla wokufuna ukukhangela phezulu. Oko kuyatshiswa kwi-DNA yethu ukusuka kwesinye isizukulwana kuye kwesinye. Ke ukuba utata usixelele ukuba konke kubi kakhulu kwaye "iingcali" ziyayazi ngqo into ekufuneka siyenzile, siyathemba. Kulungile?
Owu, uMarko wayehleli njani “uphumle” kwisitulo sakhe. Wakuthoba ukuzithemba kobuxoki ngokuzama okukhulu. Asazi ukuba lo mfo unokuba kubabhloki be-beta, kodwa yayicocekile (mhlawumbi ayizibhalanga) intetho ye-NLP eyayiswele amandla akhe, njengoko uMark wayebonakala ngathi uphulukana namandla akhe kancinane. Kwakukhangeleka ngathi ukwenza into sele kuqalile ukudlala amaqhinga kwisazela sakhe. Wayengakwazi nokugcina ulwimi lwenkobe phakathi kwemilebe yakhe.
UMark wabhekisa yonke into kuye wonke umntu, kuquka nabantu abadala. "Ukunxibelelana nomntu" kunika umbono wokuba uligunya. Ngoku ngokuqinisekileyo uMarko ukho, kuba uyinkulumbuso. Kodwa ayikacaci ukuba umntu onesifo esincinci kangaka sokuyifeza njani indima yobunkokheli eNetherlands.
"Kubo bonke oosomashishini abangena engxakini. Ikhabhathi iya kwenza nantoni na ukuba ithathe inkxaso yakho. Sizimisele ekuqinisekiseni ukuba amashishini awawi yile nto yenzekayo ngoku kwaye abantu baphulukana nemisebenziKodwa okwangoku asikatsho ukuba sikulungele kanjani. Kwaye inkcazo 'yomsebenzi' ngokuqinisekileyo ayicacanga. Ngaba uthetha ngemisebenzi enesivumelwano esisisigxina? Ngaba nabo bangabantu abaziqeshileyo? Unganikeza intetho emnandi apho uthetha 'ngokubeka yonke into kuyo yonke into', kodwa kufana noJantje esithi enkosini: “enkosi ndenza konke endinako ukuya eklasini ngexesha ngomso. ”
Umyalezo ophambili yayikuku: Siyakwazi okulungele wena kwaye kufuneka ulandele imiyalelo kunye nemilinganiselo. Guqula igama elithi 'isikhonkwane' 'ngokunyanzelwa'. Ukulandela iziqinisekiso kunye nokumamela oko urhulumente acinga ukuba kulungile kuwe. Ukuba awulandeli izikhombisi-ndlela, ululuhlobo lwendibano yokubulala abantu abasesichengeni. Kuya kufuneka uphathe loo mvakalelo wokuba netyala: uhlobo “lokwenza iintloni” kuwe.
UMark Rutte kunye nabadibene nabo bamamamele iingcali zee-virologist kwaye baxoxa ukuba indlela yeqela kunye nokuzama ukunciphisa iseli yeyona ndlela ilungileyo ukuze ungafumani mthwalo uphakamileyo ezibhedlele. Kodwa unjingalwazi wase-Italiyali yesayensi yeentsholongwane kunye ne-virology Roberto Burioni, esebenzisana neSan Raffaele Dyunivesithi yaseMilan, wayelapho njengezinkukhu Ukuxela ukuba le ndlela ayisebenzi.
Uninzi lwabantu lufumana izikhalazo ezincinci. Ukuba umntu unale ntsholongwane, lo mntu udla ngokuzikhusela emzimbeni, njengoko kunjalo ngemasisi. Ekugqibeleni, abantu bayanda ukungakhuseleki, ukuze umngcipheko we-virus usasazeke kubantu abadala nakwimpilo esemngciphekweni uyancitshiswa. "Ngokungazinzi kweqela ulwakha, ngokungathi kunjalo, udonga olukhuselayo lubajikelezileUtshilo uRutte.
Inokuqikelelwa ukuba le yeyona ndawo yakho icocekileyo. IBurioni ke iyamangaliswa lelo lizwi. Akukho sizathu senzululwazi sokuthetha ngokukhuseleka kweqela"Utshilo ugqirha waseNtaliyane. "Umngcipheko omkhulu kakhulu uthathwa ngurhulumente waseDatshi. Okwangoku asazi konke konke ukuba ingaba le gciwane linokuvela na. Oko akwaziwa nangoku. Ngaphezu koko, asikho isitofu sokugonya."
Ukuba ubuza kum, icace gca kwakhona ukuba ngowuphi umdlalo odlalwa apha. Ukuqala, uMark Rutte kufuneka oyike abantu baseDatshi ukuba konke kuyingozi kakhulu kwaye intsholongwane iyingozi kakhulu. "Inxalenye enkulu yeNetherlands iyosuleleka yi-coronavirusUye waxela.
Ke uza nokuthile okumangalisayo ukuba akhathazeke kwaye akhuthaze 'imeko kabawo uyakukhathalela'. Emva koko uchaza le ndlela, ephambuka ngokupheleleyo kwinto eyenzekayo kwamanye amazwe e-EU. Ngokubhekisele kum, injongo kukuba oku kungahambi kakuhle kwaye kuya kufuneka kubekho ungenelelo olunzima oluvela eBrussels. Ke umntu une-alibi egqibeleleyo yokuthetha ukuba amazwe awasenakwenza imigaqo-nkqubo nganye kwaye asakwazi ukungenelela nzima (imeko yongxamiseko, ukuvaliweyo).
In eli nqaku Ndicacisile ngokweenkcukacha ukuba kungenzeka ukuba sijongana nomsebenzi wengqondo (PsyOp), apho i-coronavirus covid-19 inokuba yintsholongwane eyenziweyo (bioweapon). Nge-virus ye-bioweapon, unokwenza ingxaki yomhlaba wonke ngokwakho, udale i-alibi yokuvula yonke into ebutyala yamatyala. Ngapha koko, babulala iintaka ezintlanu ngelitye elinye.
Yenza ukuba abantu baqhele ukusebenza ngamapolisa imeko ezinje ngokuvalelwa kunye nokuvalelwa kwiindawo ezithile, ezinokubeka imimandla kwaye isebenzise itekhnoloji ukubeka iliso kuyo yonke into kunye nomntu wonke;
Inika ithuba lokukhawulezisa ukutshitshiswa kwemali phantsi kwesikhokelo sokudluliselwa kosulelo. Oku kukunika i-kickstart yokufumana umkhondo wezinto zonke ezenzeka kwilizwe 'le-intanethi yezinto' kwaye unokwenza yonke into ukuba ibe phantsi kwerhafu kwaye inyuse iiprimiyamu zeinshurensi ukuba, umzekelo, ulinganisa ukuba umntu uyatshaya okanye angasebenzi ngokwaneleyo.
Inika ithuba elikhawulezayo lokonakalisa uqoqosho, ivuthulule yonke into, ukuqhuba iinkampani ukuba zibhengezwe, ukuzisa abantu kunye nosapho kwinqanaba lokuwa lokwenza inkqubo entsha yezemali. Ngapha koko, oko kunika indlela emfutshane kwitekhnoloji yobukomanisi; urhulumente othatha onke amandla kwaye asebenzisa itekhnoloji yolawulo lobuzwilakhe (iChina njengomzekelo);
Inika ukubakho kokulawula amanyathelo ebhubhane kwinqanaba lehlabathi kwaye ke ikwayinto enye ebiza urhulumente wehlabathi;
Inika ithuba lokuphumeza ugonyo olunyanzelekileyo kwihlabathi liphela.
Ndayiqikelela into enje ukuba yenzeke kwincwadi yam, apho ndithetha 'ngombhalo omkhulu'. Nangona kunjalo, indlela okwenziwa ngayo ngoku inocwangco. Kudlaliwe ngobukrelekrele kakhulu! Abantu bayakwamkela kuphela imilinganiselo yodaka xa bejamelene nengxaki enkulu kangangokuba basondele ekuphelekeni. Abaninzi abayi kubona ukuba ingxaki idalwe yibhloko yamandla efanayo neyolulela isandla esincedayo. Esosandla sisincedayo sisandla esitsala abantu ukuba baye ebukhobokeni nangaphezulu.
Lixesha lokwenyani lokuvusa iskripthi esiyi-master. Eso skripthi senkosi ngoku senzeka ngokukhawuleza. Ndicacisa ukuba icrystal icacile kwincwadi yam. Limalunga nexesha!
tags: ezikhuselayo, intsholongwane ye-Corona, Covid-19, eziziimbalasane, ibhayisikobho, ukungalingani kweqela, Amazing, amanyathelo, uphawu, udonga, Rutte, intetho
16 Matshi 2020 kwi-22: 47
Andikwazi ukukopa le vidiyo, ndicinga ukuba ilusizi nge-mister owl ngokwakhe.
Kuya kufuneka ifunde iphephandaba Iintsomi ngombhobho wentamo. Oko akukho manqaku akukhomba ezantsi, kukhokelwa kukuthanda izinto kunye nenqanaba eliphantsi.
Vumelana ngokupheleleyo neli nqaku!
16 Matshi 2020 kwi-22: 51
Ndiyagula xa ndibona loo bastard ingcolileyo inenkohliso.
Utshayela nje abemmi, akakhathali nokuba sisikroba.
Abantu abadala bavunyelwe ukuba babambe ukubulala, kuba azisebenzi kwaye zixabisa imali.
Imali esetyenziselwa indawo yokugcina izilwanyana ingeyiyo eyethu, ikhutshiwe ngokupheleleyo.
Ugonyo olunyanzeliswayo kunye nesirinji ngokuqinisekileyo oluya kuhlawula amaxhoba.
ICorona yeyona Flagi inkulu yeFal yale nkulungwane.
IVVD - BANTU BAYAFA.
16 Matshi 2020 kwi-23: 29
Hoho hayi kuphela ipati eyoyikisayo, Akukho mntu egumbini uvukele, kuphela
ngobumnene, uGreen Left kwiqela ngalinye unetyala kakhulu
Akukho mntu waziyo malunga neentsholongwane, imeko yemozulu kunye namanye amaqhinga omlingo, yonke ipiss ingathengiswa njengebhiya ukusuka eCorona ukuya eHeineken, isikolo sedrama kunye ne-Sheaksepeare (imithombo yeendaba / intengiso) enza nje umsebenzi wawo.
I-PVDA- Ukugoba iintsholongwane zomhlaba
16 Matshi 2020 kwi-23: 13
Ukuba abantu bamkele amanyathelo athatyathwayo xa abantu beziswe kukukhathala kungenzeka ukuba bayabazi ubume babantu kwaye nokungaphezulu kokufumaneka.
Ubuncinci emva koko kubonakala ngathi ihamba njengeProtocols yeMagi. Uyayazi loo ncwadi yenziwe-okanye eyenziwe yencwadi elahlekisayo. Ngaba bakhona abantu abathi le ncwadi iphefumlelweyo?
16 Matshi 2020 kwi-23: 18
Yithi uMark Rutte: Ukuba ukungasebenzi kweqela kuyasebenza, kutheni sisafuna ugonyo? Owu, hayi, yayikukuhlisela intsholongwane phantsi kancinane, ukuze ndingathethi, ukuze izibhedlele zingagcwele… thixo wam ukuba ulumke kangakanani!
Ke abantu abayakhile ukumelana nendalo bakwenza udonga lokukhusela kubantu abasesichengeni kakhulu okanye into. Ngaba usayifumana?
Igama lango-2020: 'iqela lokungathinteki'
16 Matshi 2020 kwi-23: 59
Umphathi ophezulu we-RIVM ngequbuliso ukholelwa ukuba sinokwakha ukungazinzi kwendalo kwintsholongwane. Ke ngoko awuyidingi nyani imigomo.
Ndiyayazi ingcinga: "ewe, kodwa bahlala bekho abantu abasemngciphekweni abangakhi ukumelana ngokwaneleyo".
Kodwa ngogonyo, ukhula intsholongwane kwi-fetus kwaye uyitofa ngaphambi kokuyifumana ngokwemvelo. Naxa kunjalo, umzimba wakho kufuneka ke wakhe ukungakheki komzimba. Ayibubo ubungqina bokuba izitofu zokugonya azikho ngqondo kwaye kufanelekile zisebenze ngenjongo eyahlukileyo ngokupheleleyo?
Ndiyichaza le njongo kwincwadi yam. Ewe kufuneka ndiqhubeke ndiyibonisa. Enye injongo endiyichazileyo amaxesha amaninzi apha kule ndawo:
16 Matshi 2020 kwi-23: 33
Umntu othatha amazwi ale ntejanjan ubambekile, ubambekile kufuneka afunde iskripthi kwaye ukuba kukho imfuneko yokuba uncumo lwe-colgate yakhe amaxesha ngamaxesha kwaye angabonisi nto iphantsi. I-ajenda iyaziwa kwabo bangazange balahle ukucinga okucothayo kwaye oko kuya kuncipha.
17 Matshi 2020 kwi-01: 19
Inkonzo eyimfihlo yase-Israeli iya kujonga iifowuni eziphathwayo zezigulana zekorona ukuthintela ukusasazeka kwale ntsholongwane. Inkulumbuso uNetanyahu uxele oku kwinkomfa yabezindaba. "Ezi ntlobo zezixhobo ziya kusinceda kakhulu ekufumaneni intsholongwane kunye nabagulayo, nasekunqandeni ukusasazeka kwayo," utshilo iNkulumbuso.
Inkqubo yokuxakeka yaziswa ngaphandle kwepalamente kwaye isebenza inyanga enye. Olu hlobo lwetekhnoloji yokulandela umkhondo sele lusetyenziswa kwaSirayeli ukulwa ubugrogrisi. Amalungelo oluntu kunye nabalweli babucala babalulekile kuba nabani na unokuziswa ukuba abekwe esweni. Ngokutsho kwe Times of Israel, iNkonzo eyimfihlo ithi le teknoloji ayisayi kusetyenziswa ukulandela abantu abangagcinanga isigxina sabo.
OKU KUYA KUKHONA KUKHOYO KWIINQAKU ZAMABANDLA: ICORONAVIRUS YINYE INDLELA YOKUZUZA NAMntu NGAPHANDLE KOKUGQIBELA KWONKE
17 Matshi 2020 kwi-01: 41
I-israel inamandla othuleyo ngasemva, awunakubabiza ngamagama kuba ilebheli iya kubekwa kuwe ngabarhanelwa abaqhelekileyo.
17 Matshi 2020 kwi-02: 16
Idatha enkulu kunye ne-A.I ikhokelela kuguquko lweshishini lwe-4. Nabani na ongumnini weendlela ezintsha zokuvelisa kunye neendlela ezintsha zotshintshiselwano zi-Order New World. Le ndawo yiSirayeli.
Ukulungiswa kolawulo lwe-cyber ye-cyber kubuchwepheshe be-AI kunye nobudlelwane bayo neRussia ne China
17 Matshi 2020 kwi-12: 33
Kwaye indlela entsha yokuvelisa kukuprintwa kwe-3D.Bona ukuba iinkampani zivelaphi ezinendima ekhokelayo kolu shishino.
17 Matshi 2020 kwi-10: 48
Mhlawumbi kwakhona kunomdla ukubeka izibalo zomkhuhlane i-VIRUS ecaleni kwale COVID-19, amanani okusweleka, inani losuleleko, abantu abahlelweyo, njl. Njl. Le hysteria ihamba kakhulu ngokombono wam (eyenziweyo kakhulu) !!
17 Matshi 2020 kwi-15: 30
Ngaba yenzeka ngokudibeneyo okanye ayisiyiyo nale ngxaki yezifo zengqondo, uluvo lwam lwento ephambili, ukuba ndiye ndaphawula ukuba abantu abaninzi abandijikeleyo bacoca indlu yabo kakhulu, kubandakanya negadi. Ukulahlwa kwe-bacilli, intlekele ??? uyayibona indlela abantu abaqhelekileyo abaphila ngayo ngenxa yokoyika ubuchopho obuphindaphindayo. Ngokumalunga noku, abantu abaqhelekileyo babhalisiwe, amakhoboka agqibeleleyo .. Ngelishwa kufuneka ndihlale phakathi kwabo.
Nkosi yemikhosi wabhala wathi:
17 Matshi 2020 kwi-21: 50
Umazi njani umgcini oyinyani?
Zonke iinzululwazi kwihlabathi liphela ziyavumelana kwinto enye; Le ntsholongwane ye-corina ayizange ivele ngokwemvelo, kodwa yaphuhliswa elebhu. Isizathu sokuba ungcoliseko e-Wuhan lube lubi kakhulu yayikukuba intsholongwane iphethe isilwanyana, oku kungaphaya kwengxabano, kwaye kamva kwasulelwa abantu. Emva koko, amajoni omzimba omuntu anika intsholongwane uphawu olunobuthathaka obulingana nomkhuhlane wonyaka.
Amazwe angengawo awasentshona ayamangaliswa bubugqwirha obusasazwa ngabezopolitiko kunye nabezindaba malunga nale ntsholongwane (ithambile). Bade bade bajongela phantsi uqoqosho lwesizwe kunye nobomi bezwe labo. Ukuba, njengezopolitiko, uqubuda ngokunzulu kumandla e-Globalist nakwiinkampani zorhwebo ezinxulumene nazo, phantsi koxinzelelo lwe-UN kunye ne-WHO, ingalo ende yamandla e-globalist, ngokulahla abantu nomhlaba, ke unqabile ngokunzulu. Hayi, abantu abazikhetheli ezopolitiko ezikhoyo, amandla ehlabathi abanyule.
Idiots eziluncedo, bayayithanda loo nto.
Ilungu elalililungu le-UN ye-Biology Weapons Commission ye-UN, u-Igor Nikulin, uqinisekile ukuba olu hlobo lutsha lwe-coronavirus sisixhobo sebhayoloji esiqulunqwe elebhu. Ngokutsho kwakhe, i-СOVID-19 yenziwa ngobuchule kwaye yenziwe ngamacandelo amathathu: i-coronavirus ye-mouse, i-coronavirus yenyoka kunye ne-glycoprotein protein, eyinxalenye yeyona ntsholongwane igciwane lengculaza (i-HIV). "Kwindalo, ukudityaniswa okunjalo akunakuba kwabakho," uNikulin ukholelwa ukuba i-United States kufuneka ivumele ababukeli bamanye amazwe kwiilebhu zabo, ngaphandle koko lonke ilizwe libajonga njengabaseMelika abatyholwa bokuqala.
Ngamafutshane, yangena njani le ntsholongwane kwikhonkco lokutya likaWuhan?
Ngo-Okthobha, amajoni aseMelika athabatha inxaxheba kwimidlalo yeLizwe yeWuhan. Kuyarhanelwa ukuba kukho amandla angalunganga phakathi kwabaxhasi kunye / okanye abathathi-nxaxheba kuba esi sifo safunyanwa kwangoko emva kokumka kwabo. Ukongeza, kuyamangalisa ukuba emva kophando olukhulu, ukuza kuthi ga ngoku, akukho zilwanyana zifunyenwe zithwele le ntsholongwane ...
« UMartin Vrijland wavavanywa ukuba une-coronavirus covid-19
"Nikelani ingqalelo omnye komnye", ukungavikeleki kweqela, i-coronavirus OLVG lokusebenza kunye nendlela yokuyeka obu buhlanya? »
Utyelelo lulonke: 2.490.785